रामचन्द्रले दिए कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी (भिडियो सहित) - Saptakoshionline
प्रकाशित मिति: आइतबार, साउन ०५, २०७६ समय: ९:३९:५५
इटहरी, नेपाल आदिवासी जनजाती प्रदेश नं १ यती खेर आन्दोलनमा होमिएको छ । लोक सेवा आयोगले निकालेको विज्ञापनको विरोधमा महासंघले शनिबार (हिजो ) प्रदेश नं १ बन्दको आह्वान गरेको थियो ।
शनिबार बजार बन्द गर्न बिहानै देखी इटहरीमा पर्दशनकारीहरुको भिड उल्लेख्य मात्रामा रहेको थियो । बिहानै दुई जना कार्यकर्तालाई पक्राउ गरे पश्चात महासंघले मनशान्त होटल अगाडिबाट र्याली निकालेको थियो । र्‍याली निकाल्ने बितिकै बाक्लो उपस्थितिमा रहेको प्रहरीले पर्दशनकारीलाई रोक्ने प्रयास गर्दा खेरी महासंघका सुनसरी जिल्ला अध्यक्ष राम राई सहित १५ जना भन्दा बढी नेता कार्यकर्तालाई पक्राउ गरेको छ ।
प्रहरीले नेता कार्यकर्तालाई पक्राउ गरे सगै महासंघको आन्दोलनलाई समेत प्रभाव परेको देखिन सकिन्छ । पक्राउ परे सगै महासंघको आन्दोलनलाई कस्तो असर गर्‍यो त ? अबको योजना र तयारी के छ ? प्रस्तुत छ यसै बिषयमा महासंघका युवा तथा विधार्थी नेता राम चन्द्र राई सग सप्तकोशी अनलाइनले गरेको कुराकानी :-